12 အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးသဘာဝကျောက်ခဲ | Flodeal Inc မှ.
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရှကုန်းတွင်းပိုင်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒေသ. ဒါဟာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက်ရာပေါင်းများစွာအပေါ်ကြီးထွားလာနဲ့မှန်မှန်ကြီးထွားလာဒေသဖြစ်ပါသည်. အိန္ဒိယကျောက်များအတွက်အလွန်မြင့်မားဝယ်လိုအားရှိပါတယ်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယသဲကျောက်နှင့်အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း. နေကြပါတယ်အောက်ပါ 12 အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးသဘာဝကျောက်ခဲ
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း / အစိမ်းရောင်ဂွာတီမာလာ
စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်. အိန္ဒိယကနေဂေါ်လီလုံးဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးပစ္စည်းတဝတည်းဖြစ်ကြ၏. Indian Marbles are strong, ကမ်ဘာပျေါတှငျကြော့နှင့်အလှဆုံးအရောင်စကျင်ကျောက်. အိန္ဒိယမှလူကြိုက်များသောဂေါ်လီလုံး၏စာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်အောက်ပါ, အလယ်မှာအရှေ့ဘက်တွင်ရေပန်းစားနေသော.
အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း / Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအဖြစ်လူသိများလူကြိုက်များသောအဆိုပါအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းသို့မဟုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ၏ကျောက်မိုင်း အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက် အဆိုပါ Rajasthan ပြည်နယ်ရှိများမှာ. သငျသညျအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ကြီးတွေဧရိယာအောင်အတွက်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအများအပြားအထင်ကရအဆောက်အဦးများအတွက်အသုံးပြုသည်. သငျသညျပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်အရွယ်အစားအတွက်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းဝယ်နိုင်. သင်တို့သည်လည်းမီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အတွက်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကိုသုံးနိုင်သည်.
အိန္ဒိယကနေအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း isacollection of different types of white marble available in Udaipur and Rajnagar Area. သငျသညျကြမ်းပြင်များနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ရာတွင်အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဤသည်မှာလည်းကြီးမားသောဧရိယာအခင်းအဘို့သင့်လျော်သည်. အိန္ဒိယကနေအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်နာမည်ကြီးရှိတ် Zayed ဗလီများတွင်အသုံးပြုသည်. အိန္ဒိယကနေပရီမီယံအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကိုအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သောအများကြီးနဲ့အခြားအထင်ကရအဆောက်အဦးရှိပါတယ်.
သငျသညျအဖြူရောင်စကျင်ကျောက် 60 ဖြစ်ပါတယ်ဝယ်နိုင်×30 60×60 သို့မဟုတ်ကျပန်းပြား. ဒီအခင်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးမုတ်သုံသစ်တောဘရောင်းစကျင်ကျောက်မြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့်ရေချိုးခန်းကြွေပြားများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဒါကအိန္ဒိယကနေထိုကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအညိုရောင်နောက်ခံလှပသောမဲမှောင်ညိုများနှင့်ကြက်သွေးသွေးပြန်ကြောများက intersected ဖြစ်ပါတယ်. မိုးသစ်တောဘရောင်းစကျင်ကျောက် အခြားအအရှေ့ပိုင်းအလယ်နိုင်ငံများတွင်ထက်တူရကီတွင်ပိုမိုရေပန်းစားသည်.
သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှမုတ်သုံသစ်တောစကျင်ကျောက်အတွင်းပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်ဝယ်နိုင်. ကျနော်တို့ထဲမှာပြားအောင်2နှင့်3စင်တီမီတာအထူ. ငါတို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာများနှင့်အထူ၌သင်တို့ကိုအုပ်ကြွပ်ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်.
မိုးသစ်တောတွေရွှေကျင်ကျောက် Bidasar ဧရိယာကနေရွှေသွန်းစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကမုတ်သုံသစ်တောဘရောင်းနှင့်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းနှင့်အတူကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. မိုးသစ်တောရွှေမြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့်အထိမ်းအမှတအသုံးပြုသည်. ဒါကအလှဆုံးကိုရွှေစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ မိုးသစ်တောရွှေကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း ထိုကဲ့သို့သောပိုလန်နှင့် brush အဖြစ်ချောအတွက်ရေပန်းစားသည် (ရှေးဟောငျးဖွစျသော), သောမိုးလုံလေလုံဧရိယာထဲမှာရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်.
သငျသညျမွို့ရိုးကိုဝတ်ရာတွင်မုတ်သုံသစ်တောရွှေစကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, မီးဖိုချောင်ထိပ်. ကျနော်တို့အခင်းအဖြစ်သုံးစွဲဖို့သငျသညျအကြံပြုကြဘူး.
Jaisalmer ရွှေကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအိန္ဒိယကနေအခြားလူကြိုက်များကိုရွှေစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, သောအရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာကျယ်ပြန့်လက်ခံမှုရှိပါတယ်. ဤသည်စကျင်ကျောက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ပြီးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. အတော်များများကအရှေ့ပိုင်းအလယ်ဘုံဗိမာန်ဘုံဗိမာန်များနှင့်မြေရိုးကိုများအတွက်အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်ဒီစကျင်ကျောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ. အဆိုပါ Jaisalmer ကိုရွှေစကျင်ကျောက် ထိုကဲ့သို့သော honed အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါပြီးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ပွတ်, ချုံပုတ်ထုနှင့် sandblasted.
အပြင်အိန္ဒိယကနေအထက်ဂေါ်လီလုံးကနေ, ထိုကဲ့သို့သောမုတ်သုံသစ်တောစိမ်းလန်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအဖြစ်များစွာသောအခြားအရောင်များရှိပါတယ်, မာကျူရီအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များ ganing ထားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း. သင်ဤ link ကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း browse နိုင်ပါတယ်.
အိန္ဒိယကျောက်, မည်သည့်ငြင်းခုံခြင်းမရှိဘဲ, ကမ်ဘာပျေါတှငျအလှဆုံးနှင့်လူကြိုက်များကျောက်များမှာ. အိန္ဒိယကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှာကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ကျောက်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်. အိန္ဒိယကျောက်ခင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, မြို့ရိုးကိုဝတ်, ကြီးမားသောဧရိယာအခင်းများနှင့်ချမှတ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ. အရှေ့အလယ်ပိုင်းအများအားဖြင့်အောက်ပါအိန္ဒိယကျောက်ကိုဝယ် :
အဆိုပါအနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်ဖြစ်ကောင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးအိန္ဒိယကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကျောက်အားလုံးအလယ်မှာအရှေ့ကျော်ကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များမှုရှိပါတယ်. သငျသညျမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်အနက်ရောင်က Galaxy သုံးနိုငျ, မြို့ရိုးကိုကွက်များ, အခင်းကွက်များ, ရေချိုးခန်းကွက်များ, မြင့်တက်ခြင်းနှင့်စားပွဲတင်ထိပ်. အဆိုပါ Black ကက Galaxy ကျောက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ဝယ်လိုအားရှိပါတယ်. ယေဘုယျအားဖြင့်, ကလူကဒီပစ္စည်းအတွက် Big Size ကိုပြားဝယ်ဖို့ပိုနှစ်သက်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ပြား 60×30 အုပ်ကြွပ်အသုံးပြုမှုတွင်လည်းအလွန်ရှိပါတယ်.
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်သို့မဟုတ်ပရီမီယံက Black ကျောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသုံးအများဆုံးကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကအစိုင်အခဲအနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Absolute က Black လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဖြစ်အသုံးများဖြစ်ပါသည်. မှောင်မိုက်ကျောက်မီးဖိုချောင်အလွန်လှပသောစေသည်. ထိုကဲ့သို့သောမြို့ရိုးကိုဝတ်အတိုင်းဤကျောက်များအတွက်များစွာသောအခြားအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်, ကြီးမားသောဧရိယာ flooring စသည်တို့ကို. အဆိုပါ အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black နှင့်အလတ်စားအနက်ရောင်ကျောက်စီးပွားရေးနှင့်လူနေအိမ်အသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်. ဤသည်ကျောက်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်၎င်း၏အစိုင်အခဲအနက်ရောင်အရောင်မှမဆိုအရောင်ဆောင်ပုဒ်အတွက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်. ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများဆုံးရောင်းကျောက်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ.
အဆိုပါ Crystal အဝါရောင်ကျောက်ကြီးမားသောဧရိယာစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားသောဧရိယာအခင်းများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ပစ္စည်းကအရမ်းတသမတ်တည်းနှင့်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါသည်. ဘယ်မှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပေါ်မယ့်အများအပြားကြီးမားသောစီမံကိန်းများရှိပါတယ် crystal အဝါရောင်ကျောက် အလွန်ကိုအသုံးပြုသည်. ဤလှပသောကျောက်၏လူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်အစား 60 ဖြစ်ပါသည်×30 တက်လှေကားများအပြင်. ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအတွက်အလွကြည့်. သငျသညျအသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးများအတွက် Crystal အဝါရောင်ကျောက်ထဲမှာပြားနှင့်အုပ်ကြွပ်ဝယ်နိုင်.
Tan ကဘရောင်းခြောကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအညိုရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. မှောင်မိုက်အညိုနှင့် tan အရောင်ကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အခင်းအောင်အသုံးပြုသည်. ဤသည်ကျောက်စီမံကိန်းများအတွက်အလွန်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်ယူနီဖောင်းကျောက်ဖြစ်ပါသည်. Tan ကဘရောင်းကကျောက် ကြီးမားသောမောလ်များအတွက်အသုံးပြုသည်, စျေးဝယ်ရှုပ်ထွေးသော, နှင့်လူနေအိမ်ရှုပ်ထွေးသော. ဒီကျောက်များ၏ထိတွေ့မှုနှင့်ခံစားအလွန်ပရီမီယံများမှာ, သို့သော်, ဒါကြောင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းကျောက်တစ်အလတ်စားဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါလူကြိုက်များအရွယ်အစား 60 ဖြစ်ကြသည်×30 အငယ်ပြားအတွက် 1.8 စင်တီမီတာအထူ.
ကဲ့သို့သောများစွာသောအိန္ဒိယကျောက်ရှိပါတယ် ကိုလိုနီခေတ် White ကကျောက်, မြစ် White ကကျောက်, ပလက်တီနမ် White ကကျောက်, နှင့် rosy ပန်းရောင်ကျောက်, အလယ်မှာအရှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များနေသော. သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါလင့်ခ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု browse နိုင်ပါတယ်.
သဲကျောက်ပြင်ပအခင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်, မြို့ရိုးအမြင့်, ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်နှင့်ရေကူးကန်အခင်း. အိန္ဒိယသဲကျောက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအတွက်အလွန်လူကြိုက်များ. အတော်များများကစီမံကိန်းများကိုကဤပစ္စည်းများကို၏ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ပိုမိုနှစ်သက်ပြင်ပအခင်းအဖြစ်သဲကျောက်ပါဝင်ပတ်သက်နေ. အောက်ပါအရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များသည့်သဲကျောက်များမှာ :
Dholpur Beige သဲကျောက်
Dholpur Beige အိန္ဒိယကနေပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးနိမ့်သောစျေးနှုန်းသဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကသဲကျောက် Villas အတွက်မြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့်ဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုးများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ဟိုတယ် Resort & လူနေထိုင်ရာ. ဤ Dholpur Beige သဲကျောက် အရောင်အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့်တော်ဝင်ခံစားပေးသည်. အဆိုပါလူကြိုက်များအရွယ်အစား 56 ဖြစ်ကြသည်×56, 40×40, 60×30, 30×30 အဆိုပါ Dholpur Beige သဲကျောက်အတွက်.
the Rainbow သဲကျောက်အိန္ဒိယကနေအခြားလူကြိုက်များသဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါကသဲကျောက်အများအားဖြင့်မိုးလုံလေလုံမြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့် poolside အခင်းများတွင်အသုံးပြုသည်. The nature of this stone makes the floors nonslippery. the Rainbow သဲကျောက် ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့် sawn နှင့် honed ပြီးနှင့်တကွကြွလာ (ချော Mat). ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အတွက်လူကြိုက်များသဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကြီးမားသောလူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းတွေအတွက်အသုံးပြုသည်.
Teakwood သဲကျောက်အဆင်းလှသော woodlike သဲကျောက်ဖြစ်ပါသည်. သဲကျောက်၏ကျောက်မိုင်းဟာသက်တံ့ရောင်သဲကျောက်အနီးတွင်တည်ရှိသည်. နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤမှာသဲ၏ဂုဏ်သတ္တိများအတူတူပါပဲ. အဆိုပါ Teakwood သဲကျောက် အဝါရောင်နှင့်ရွှေအဆင်းအရောင်နှင့်ကြွလာ. ရုံသက်တံ့ရောင်သဲကျောက်များကဲ့သို့, သငျသညျ poolside အခင်း၌ဤပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်သည်, မြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့်ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်.
သငျသညျ link ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပါအားဖြင့်အိန္ဒိယကနေပိုပြီးသဲကျောက်ရှာတှေ့နိုငျ.
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုမှုနှုန်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာများနှင့်အထူအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဤလူကြိုက်များအိန္ဒိယကျောက်ခဲဝယ်နိုင်. အရှေ့အလယ်ပိုင်းအောက်ပါနိုင်ငံများပါဝင်သည် :